बुबाको मुख हेर्ने दिन तपाईंको मन नै रुवाउने तपाईलाई काम लाग्ने ३५ स्टाटस
बुवा सबैका आर्दशका पात्र । तिनै आदर्श पुरुष बुबाको मुख हेर्ने दिन आफ्ना जन्म, कर्म दिने पितालाई सम्मान अर्पण गरिन्छ ।
नेपालमा कुशे औंसी सनातन हिन्दू परम्परामा अनुसार भाद्र महिनाको अमावस्या अर्थात औंसी तिथिका दिन बुवाको मुख हेर्ने दिन मनाइन्छ ।
बुबालाई सम्मान गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका केही स्टाटस यहाँ तपाईंसँग शेयर गरेका छौं । जुन तपाईंलाई शुभकामना आदानप्रदानका लागि सहयोगी बन्नेछन् :
१. सबैले भन्छन् म आमा जस्ति देखिन्छु रे, साँचो हो, तर म त हुँ बाबाकी प्यारी छोरी ।२. चाहे जति अलार्म लगाओ, बिहान उठ्न बुवाकै आवाज काफी हुन्छ ।३. हरेक अपराध र गल्तिलाई माफ गर्ने मात्र एक ब्यक्ति हुन्छ, बुवा ।४. म यहासम्म पुग्नुमा हरदिन मेरो बुवाको मेहनत छ ।५. मेरो हिम्मत र मेरो कमजोरी दुबै हजुर नै हो बुवा ।६. जसको रिसमा स्नेह र गालीमा आफ्नोपन हुन्छ, उहालाई नै बुवा भनिन्छ ।७. एक हस्ती जो मान हो मेरो, मेरो बुवा पहिचान हो मेरो ।८. पिता बन्नु पिता हुनु भन्दा सजिलो छ ।९. तपाईको ओठमा हासो कमाएको दिन म धनि हुनेछु, बुवा ।
१०. हरेक छोरी हुनेवाला पतिमा आफ्नो बुवाको स्वभाव खोज्छिन्, थाहा छ किन ? किनकी गाली गरेपछि पनि बुवा छोरीलाई हसाउँन जान्दछन् ।११. मेरो जन्मदाता, मेरो संरक्षक र मेरो सच्चा सर्मथक मेरो बुवालाई धेरै धेरै शुभकामना ।
१२. हरेक सफल छोरीका पछाडि एक पिताको हात हुन्छ ।
१३. दुखी हुदा बुवाहरु रुदैनन्, त्यसैले बुवाहरु हर्टअट्याकले बित्ने गर्दछन् ।१४. बुवा निमका रुख झै हुन्, जो तितो भए पनि लाभदायक हुन्छन् ।१५. पिता बाहेक अरु कसैले तपाई उ भन्दा सफल हुनुहोस् भने चाहँदैन ।१६. म तपाईको नामबाट मात्र पुर्ण छु, बुवा । यो नै मेरो शान हो ।१७. तपाईको कठोरता भित्रको वास्तविकता बुझ्न सकिन, सरी बुवा ।१८. सायद तपाई भएको भए, यो बेला म संसारको धनि मानिस हुने थिए । बुवा ।१९. बाल्यकालमा मलाई बुवाभन्दा साँझ प्यारो लाग्थ्यो, बुवा खेलौना ल्याउनुहुन्थ्यो अनि साँझ मेरो बुवालाई घर फर्काउथ्यो ।
२०. विश्वका सबैभन्दा धनी मानिस पनि आमाबुवा बिना, गरीब हुने गर्दछ ।२१. हर सफल मानिसको पहिचान पनि उसको पिताबाट बनेको हुन्छ ।२२. सपना मेरा थिए, तर पुरा बुवाले गर्नुभयो, बाटो म हिड्दथे तर बाटो बुवाले देखाउनु भयो ।२३. बुवा मेरो त्यो घमन्ड हो जो कसैले तोड्न सक्दैन ।२४. इच्छा त बुवाको कमाइले पुरा गरिन्थ्यो, आफ्नो कमाइले त गुजारा मात्र हुन्छ ।२५. मेरो साहस, मेरो इज्जत, मेरो सम्मान हो, बुवा ।२६. मेरो शक्ति, मेरो पुँजी, मेरो पहिचान हो बुवा ।२७. जिन्दगी जिउनुको मजा त, तपाईसँग सिक्का मागेर खर्चिनुमा हुन्थ्यो । आफ्नो कमाई त आवश्यकता टाल्दा टाल्दै सकिन्छ ।२८. म त्यो दिनको पर्खाईमा छु, जुन दिन म तपाई जस्तो बन्न सक्छु, बुवा ।२९. बुवालाई म के उपहार दिऊ, जन्मदाता उपहार दिने हैसियत मसँग छैन ।
३०. तपाईको रीस देखेर म सानोमा डराउथे बुवा, सायद मैले बुझिन त्यो तपाईको प्रेम थियो ।३१. एक बुवा सय सन्तानका पालनहार बन्न सक्छन्, तर सय सन्तान एक पिताको पालनकर्ता बन्न सक्दैनन् ।३२. जब बुवा सन्तानलाई केहि दिन्छन्, तब दुबै हाँस्दछन् । तर जब सन्तान बुवालाई केहि दिन्छन्, तब दुबै रुन्छन् ।३३. घरबाट माइती फर्कदा छोरी हासेको हेर्ने हरेक बुवाको इच्छा हुने गर्दछ ।३४. एक पितालाई उमेर ढल्कदै गएपछि सन्तान झै प्यारो अरु कोहि हुदैन ।
३५. थाकेको शरीर बोकेर पनि काममा जाने मेरो बुवालाई हार्दिक नमन ।